Forum serasera malagasy Ny fahefan'ny Soratra Masina - Dinika forum.serasera.org
Ny fahefan'ny Soratra Masina
Fitohizan'ny hafatra : Ndeha indray àry lazaina hoe io resaka lavabe laz...
Miharena - 30/05/2013 08:09
Ndeha indray àry lazaina hoe io resaka lavabe lazainao io momba ny fahefan'ny Soratra Masina io resahana amin'ny namana Tsartsara ohatra, izay olona tsy namaky Baiboly hatrizay niainany fa tonga dia Jesoa no nampianatra azy!!!
Tsy mahatsiaro ve ianao fa toy ny olona mindran-teny fotsiny amin'ireo? Ary mety higagàn'ny namana mahazo mivantana ianao amin'izay.
Amiko tsy fahefana ny Soratra Masina fa Andriamanitra sy Jesoa no manam-pahefana satria VELONA miresaka ANKEHITRINY fa tsy mitantara.
Dia izay mifandraika amin'izay firesahana ankrehitriny izay no marina. Ny ambiny tantara toy ny hoe nisy ny ady lehibe teto amboni'ny tany. Tsy fahefana izany amiko. Asa aloha ho anao!!
Fa izany tsy milaza hoe diso daholo ny fanadihadianao ny voalaza ao anaty Baiboly fa ny lohateny no diso amiko.
Nehemiah - 30/05/2013 09:48
Ianao ary efa nataonao mazava fa tsy manaiky ny hamarinan'ny Baiboly rehefa tsy mety aminao koa inona indray ?
Ary aleo tsy mihatsaravelatsihy isika fa lazaiko aminao marimarina tokoa ilay resaka Tsaratsara asesikao isaky ny mihetsika nefa efa naseho mazava fa fôsika io.
bor2lais - 30/05/2013 15:04
Nehemiah - 30/05/2013 16:02
Bor2lais >> Ity mihitsy ny rohy, sao dia ataon'olona hoe manendrikendrika aho :
Jereo ny takelaka faha2 @ dinika, manaza i Tefigasy @ alalan'ny fitanisàna lahatsoratra avy @ Midi Madagasikara fa nanao faminaniana sandoka i Tsaratsara, ary fantantsika izay lazain'ny Baiboly momba ny mpaminany sandoka : raha voa tsy tanteraka na dia ny faminaniany 1 aza dia mpisoloky ilay olona.
endriny - 30/05/2013 17:42
Ny soratra masina Tompoko dia tsy misy fahefana, fa ny olona mandala azy no mandika sy mamadika azy ho fahefana, fa io tantara ny fanavotana ny zanak'israely io, fa tsy hoe fanavotana gidro any afrika, ahahahahhaha
Miharena - 31/05/2013 03:37
Jereo ny takelaka faha2 @ dinika, manaza i Tefigasy @ alalan'ny fitanisàna lahatsoratra avy @ Midi Madagasikara fa nanao faminaniana sandoka i Tsaratsara, ary fantantsika izay lazain'ny Baiboly momba ny mpaminany sandoka : raha voa tsy tanteraka na dia ny faminaniany 1 aza dia mpisoloky ilay olona
Aza tonga dia mitsara ianao namana.
Anisan'ny hitako taratra mandrakariva eo amini'ny olon'ny boky ity fitsarana olona ity. Ary anisan'ny tsy mba isehoan'i Jasoa mihitsy ny olona manana izany fanamarinan-tena izany eo anatrehan'ny fahaizana maro efa nangoniny nandritra ny naha-Kristianina azy.
Hoy Jesoa izay hoe : Mat 11: 25 Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika.
Lk 10: 21 Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko ô, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika; eny, Raiko, fa izany no sitrakao
Mahagaga mihitsy fa izay voalazan'ny gazety no hakany tsoa-kevitra amin'ireny mpijoro vavolombelona ireny. Tsy manadihady ry zareo hoe inona marina no nitranga tamin'ny fotoana nisian'ilay resaka Apostoly nandrasana hitsangana tany Mahajanga iny. Ny fanontaniana dia hoe sitrapon'ilay fianakaviana ve sa sitrapon'Andriamanitra Tompon'ny aina ilay tokony mbola hananganana azy? Sa hanaporofoana io tenin'iJesoa eo ambny io momba ny fatra-pitady famantarana?
Tefigasy - 31/05/2013 06:41
Mahagaga mihitsy fa izay voalazan'ny gazety no hakany tsoa-kevitra amin'ireny mpijoro vavolombelona ireny. Tsy manadihady ry zareo hoe inona marina no nitranga tamin'ny fotoana nisian'ilay resaka Apostoly nandrasana hitsangana tany Mahajanga iny.
Raha mba nanadihady ary ianao ramose dia mba ento eto ny valin'izany fanadihadiana izany mba ho hitan'ny be sy ny maro fa aza faly manohitra ny fahamarinana fotsiny. Misy raki-peo natao mihitsy mirakitra ny tenin'i Tsaratsara mikasika ny hitsanganan'ilay apostoly amin'ny maty afaka 3 andro taorian'ny fahafatesany izay nataon'ny mpanao gazety ihany, ary voatahiry any amin'izy ireo, afaka angatahinao any aminy raha tsy ampy ny fanadihadiana nataonao.
Ny fanontaniana dia hoe sitrapon'ilay fianakaviana ve sa sitrapon'Andriamanitra Tompon'ny aina ilay tokony mbola hananganana azy? Sa hanaporofoana io tenin'iJesoa eo ambny io momba ny fatra-pitady famantarana?
Dia apetraho any amin'i Tsaratsara io fanontanianao io satria raha ny fahitako azy dia sitrapony ilay izy, nilaza tamin'ny fahasahiana izy nefa teny izay tsy nambaran'i Jehovah, tsy sitrapon'Andriamanitra akory ny zavatra tadiaviny.
Tsy fitsarana akory ny filazana ny zava-misy, ny zava-marina, mba hiavahan'ny tena vary amin'ny tsimparifary, hiavahan'ny ondry amin'ny amboadia !
bor2lais - 31/05/2013 09:16
Averiko eto indray ity :
Tsy efa nilazako ve ianareo e !
Nehemiah - 31/05/2013 09:22
Ary nahoana moa raha mba toherinao na dia ny hevitra 1 @'izay narosoko fa tsy tonga dia mandidy tsy manapaka tsy misy porofo tahak'izao ? Hony ?
Nehemiah - 31/05/2013 09:24
Anisan'ny hitako taratra mandrakariva eo amini'ny olon'ny boky ity fitsarana olona ity.
Miharena - 31/05/2013 22:11
Mety ho marina daholo ny fihevitrareo fa izaho indray mahita fa tsy tonga lafatra ny olona na dia iray aza. Raha mahazo fahefana izy dia mety ho diso fampiasa izany. Toy ny manan talenta io, mety ho diso fampiasa izy. Nefa eo indrindra no hita taratra hoe azo tsapaina hatraiza ny finoan'ny olona ary hainy ve ny manavaka ilay fahalemen'ny olona raha toa ka diso fiseho ny faminaniany?
Mitovy mihitsy amin'ilay hoe : tonga Jesoa nilaza hoe "Izaho sy ny Ray dia Iray ihany" dia tsy misy milaza hoe marina izany na dia iray aza.
Dia miverina ihany aho amin'ilay resaka fitsanganan'ilay apostoly nodimandry voalaza. Heverinareo ve natao iny teny iny hinoan'ny maro fa izy (Tsaratsara) tokoa no iraka raha tanteraka izany? Natao tsy tanteraka izany mba tsy hahitanareo ny marina. Satria izany dia fitsapana finoana ihany. Io ilay hoe nafenina ny manan-tsaina ny marina.
Nehemiah - 01/06/2013 08:48
Miaiky ny tenanao ho tsy manan-tsaina angaha ianao ?
Miharena - 02/06/2013 23:09
Eny, tsy manana aho kah! Andriamanitra no mampanana ahy fa tsy misy ahy io na kely aza! Asa ny anao?
Nehemiah - 03/06/2013 07:43
Ay, ka midika izany fa tsy afaka manana adi-hevitra ara-pisainana isika ka tsy misy inona na inona ifampiresahantsika intsony !
endriny - 12/06/2013 21:56
Ianao aloha dia voalohany amin'ity fanambaniana olona eto ity
Miharena - 13/06/2013 08:57
Asa tokoa aloha !
Hoy ny namana moa hoe tsy misy ifampiresahana intsony. Asa na azonao antoka namana Nehemiah fa tsy misy saina ianao raha tsy Andriamanitra no mampisy saina anao. Isika rahateo tsy hoe namorona izany saina izany fa avy AMINY izany.
Ny mandrafitra ny rohin-kevitra rehetra izay omenao anie dia fantatra mazava hoe avy amin'ny fandinihanao ara-tsaina e! Ary rehefa mamaky izany aho dia mahita hoe mbola tsy mino ny namana Nehemiah fa mandeha amin'ny herin'ny sainy. Mandeha amin'ny traikefa. Nefa avy aiza ny traikefa? tsy avy amin'ny tranga ve?
Fa ny fanahinao izay iraisanao amin'Andriamanitra, azon'ny sainao veroka ve ny aminy?
aha mamaky aiboly no itarafanao ny fanahinao, hitanao tsara ve ny fehezanteny mazava sy tostra mamehy izany? Sa raha tsy mahay ny tantaran'ny Israely dia tsy mpino izay ny olona?
Ka hoy aho hoe : tsy ny tantara no inona fa izay FOTOTRA voalaza momba ny fanahy fahamarinana.
Nehemiah - 13/06/2013 10:39
Dia omeo rohy ary aho, sao dia tsy mitovy ny famaritantsika ny atao hoe fanambaniana
Nehemiah - 13/06/2013 10:41
He he he, fanontaniana retôrika ny teo. Raha misy mihevitra an'izay ho fanambaniana dia tokony mampihatra lôjika kely.
mamonjy1 - 08/05/2014 08:04
Tohanako ny Hevitrao Nehemia na dia efa somary aty aoriana aho no mamaly,Fa ny teniny tsaratsara io dia marina.
Araka ny teniny Tompo lanao hoe !Izay mino aho tsy handalo fahafatesana.Ary na Maty aza de velelona indray.
Arapanahy ary ny fitsanganany,fa tsy aranofo.Ary izany indrindra no tiany tsaratsara ho lazaina fa tsy fantatrareo.
Efa niasa lafy izy ka rariny raha tsy naverina @nofony.,fa manana olona maro isika hanohy ny asany..Fa tsy tokony sakaja hanakianana mpaminany izany teny rehetra izany.
Efa nitsangana tokoa izy..Araka ny teniny Tompo manao hoe,izay
mamonjy1 - 08/05/2014 08:05